Waxa la sheegay in shaqaalaha hoos yimada maamulka magaladan addis ababa mushaharkoodi hal bil si qasab ah looga jaray - ዜና ከምንጩ
Waxa la sheegay in shaqaalaha hoos yimada maamulka magaladan addis ababa mushaharkoodi hal bil si qasab ah looga jaray
Maamulka magaalada addis ababa ayaa yidhi madama aan khasnadayda 734 milyoon oo bir ka bixiyaya waa qasab.
Xafiisayada hoos yimaada maamulka magalada addis ababa ee dawlada shaqaalahooda ayaa wargayska addis maleda u waramay in lacagti u maamulku u uruurinaayay ciidanka qaran ee lagu taakulaynaayay si qasab ah looga jaray hal bil mushahaarkoodi.
Waxa ay sida oo kale wargayska ay shaqaaluhu u sheegen in xafiisyada dawlada ee maamulka hoos yimada oo ah kuwo darajooyin sare haysta iyo shaqaale hoosaad ba ah ayaa maamulku waxa u uso qoray waraaq sheegaysa in shaqaaluhu ay ogolaanshahooda ay mushahaarkooda hal bil ah ugu deeqeen cidanka qaran, balse ay ka duwantahay sida waraaqda ku qoran iyo sida ay xaqiiqadu tahay.
Wargayska addis maleda oo arkay foomki lagu uruurinayay lacagta kaalmada ah, ayaa hubiyayay in ay ku qorantahay oo cinwaanna looga dhigay “xafiisyada dawlada ee hoos yimaada maamulka magalada addis ababa shaqaalaha ka shaqeeya gargaarka ay u fidinayaan ciidanka qaran waraaqadi ay ku xaqiijiyeen”.
Waraaqdaasi ay ku qorantahay balanta ay shaqaalaha maamulka ku galeen oo maamulku qaybiyay ayaa waxa ku qoran xogta shaqaalaha oo dhan iyo mushahaarkooda bisha, sida oo kale waxa ku xusan in ay shaqaaluhu ay ogolaanshahooda ku bixiyeen deeqdaasi. Waxa kale oo waraaqdaasi ku qoran in Lacagtaasi xiliga ay ku bixinayaanna shaqaaluhu ay tahay hal sano laga bilaabo bisha hamle 1deeda 2013 ilaa bisha nahaase 30keeda ee 2014.
Foomkaasi loo qaybiyay xafiisyada hoos yimada maamulka magalada addis ababa ee dawlada ee loogu uruurinaayo lacagta kaalmada ah ee cidanka qaranka ayaa waxa ku qoran “mushahaarkayga hal bil oo aan waxba laga jarin ayaa waxa aan ugu deeqaya ciidanka qaran oo bil kasta mushaharkayga wax laga jaro mudo sanad ah taasina waxa aan ku xaqiijinaya saxeexayga”. Arinta oo sidaasi ah ayaa hadana shaqaalaha ka shaqeeya xafiiyada hoos yimaada maamulka magaalada addis ababa ee dawlada oo wargayska addis maleda u waramay ayaa sheegay in foomkaasi ay saxeexen aanu ahayn mid ay ogolaanshahooda ku saxeexeen oo u yahay mid lagu khasbay.
Sida ay shqaaluhu sheegeen hadii ay tahay deeqdu mid ay shaqaaluhu ogolaanshahood ku bixiyeen waxa laga dhigi laha in cid kastaba ay ugu deeqdo inta ay awoodi karto. Sidaas awgeedna waxa waraaqda ku qoran ayaa ah mid lagu khasbay shaqaalaha, waxa ay yidhaahdeen hadana waxa haboonayd in shaqaalaha laga uruuriyo wixii ay awoodayaan oo kaliya.
Sida oo kale shaqaaluhu waxa ay wargayska u sheegeen in waraaqaha u qaybiyayay maamulku ay ku qorantahay mushaaharkooda hal bil ah oon waxba laga jarjarin, shaqaalaha qaar oo aan awoodi karayn in mushahaarkooda hal bil ah ay ugu deeqaan cidanka ayaa waraaqihi loo qaybiyay kaga codsaday maamulka in ay bixiyaan kolba sida ay awoodoodu tahay in ay ugu deeqan lacag ka yar mushahaarkooda hal bil, balse aan laga ogolaan codsigoodi.
Sida u wargayska addis maleda u soo xaqiijiyay in ay shaqaalah qaar ka mid ah ay ku xaqiijiyeen in ay ogolyihiin in laga jaro mushahaarkooda boqolkiiba 20 iyo boqolkiiba 50 ayaa waxa dib loogu soo celiyay waraaqdi codsigoodi oo loo sheegay in ay bixiyaan mushahaarkooda hal bil oo an waxba laga jarin in ay khasab tahay.
Shaqaalihi diiday amarkaasina waxa ay sheegeen in mushahaarkoodi bishi hamlee aan ila iyo intii xogtan lagu soo qoray wargayskan aan loo sii dayn.shaqaalahasi aan loo siidayn mushahaarkooda ayaa waxa ka mid ah macalimiin, hadaba maclimiintaasi ayaa waxa ay sheegeen in mushahaarkoodi imika ka hor ay qaadan jireen marka ay bishu tahay 23ka ilaa 28ka inta u dhaxaysa, mushaharkoodi ayaa ka raagay sidaas darteedna lacagti ay ku bixin jireen kirada guryaha iyo waxyaabihi asaasiga ahaa ee ay ku iibsan jireen dhibaato ayay kala kulmeen.
Wargayska addis maleda oo dhagaystay cabashada shaqaalahasi maamulka hoos yimaada ee yidhi mushahaarkayaga hal bil ma bixin karno ee aan bixino wixi aan awoodi karno ayaa tagay xafiiska maamulka magalada addis ababa.
Sintayehu Dheribe oo ah xirfadle xafiiska maamulka magalada addis ababa dhinca war baahinta ayaa u sheegay wargayska oo yidhi shaqaalaha dawladu kuligooduba marki hore way ogolaaden in mushahaarkooda hal bil ah laga jaro, sidaas darteedna maamulku waxa u khasnadiisa ka bixiyay lacag dhan 734 milyoon oo bir. Hadii ay cabasho sheeganayaan waxa ay ahayd in markii hore ay sheegtaan, madaama lacagtiina la bixiyay imika way ku khasbanyihiin in laga jro mushahaarkooda.
Total views : 7512466